ယောဟန်အောင်: နေရာလွဲခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ
ဒါပေမယ့် တကယ့်လူထုထောက်ခံမှု တခဲနက်ရတဲ့
ခေါင်းဆောင်ကြီးလို အစီအစဉ်တကျ ပြတယ်။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် မစ်ရှင်တခု၊
အလုပ်နဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် သဘာဝတွေရဲ့ ကြည်နူးဖွယ်တွေကို ပြတယ်"
"ချေ" ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်သူတဦးက ရေးကြတယ်။ ကျနော်က မိတ်ဆွေတဦး ကြည့်နေတာနဲ့ 'ချေ' ရုပ်ရှင် ကားကို ကြည့်နေ ဖြစ်တယ်။ ဒါရိုက်တာ စတီဗင် ဆိုဒါဘာ့ဂ် (Steven Soderbergh) ရိုက်တဲ့ ချေ ဂွေဗားရားအကြောင်း ဇာတ်ကား၊ ၂- ကားတွဲထဲက ဒုတိယပိုင်းကားကို ကြည့်ဖြစ်ကြတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဒီနေ့က (၈) လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ၂၂ ပြည့်နေ့ကို ၂-ရက် အလိုပေါ့။
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ချေဂွေဗားရားကို အရူးအမူး ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးတာပေါ့။
သံပုရာခွံဦးထုပ် တစောင်းဆောင်းထားတဲ့ သူရဲ့ ပုံရိပ်က ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ အသဲစွဲပေါ့။ ကျနော်တို့တင် မက ပါဘူး။ တော်လှန်လိုစိတ်သွေးကြွနေတဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက လူငယ်တော်တော်များများက သူ့ကို အားကျ လေးစားခဲ့ကြတယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ပေမယ့် ဆေးထိုးအပ်မကိုင်.. ရိုင်ဖယ် သေနတ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ "လူတယောက် ချင်း ခံစားရတဲ့ ရောဂါတွေကို ကုရတာထက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ကုသပေးရတာ ပိုအကျိုးရှိပါတယ်" .. ဒီပြောစကား ကိုလည်း ကျနော်တို့ အသည်းစွဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လူ ၁၂- ဦးနဲ့ ကျူးဘား တော်လှန်ရေးကို စခဲ့တာဟာ ကျနော်တို့ စိတ်ကူး ယဉ်စရာ အကောင်းဆုံးပေါ့။ သူဟာ အရင်းရှင်ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့ ရာသက်ပန် တော်လှန်ရေးသမား.. ဒီလို ကောင်းသတင်းတွေပဲ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ နိဂုံးကို ဖတ်နေရတဲ့အချိန်မှာတောင် "ဒီ အရင်းရှင် တွေဟာ .. လူမဆန် ရက်စက်လိုက်လေ" ဆိုပြီး ဒေါမနဿတွေ ပွားနေခဲ့ရတယ်။ ဒီလောက်အထိ သူ့အကြောင်း ရဲခေါင် ပြောက်ကျားဇာတ်လမ်းက ကျနော်တို့ ဘ၀ကို ကြီးစိုးသြဇာလွှမ်းခဲ့တယ်။
'ချေ' ရုပ်ရှင်မှာ ပထမပိုင်းက ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာ ကျူးဘားတော်လှန်ရေး စတဲ့အပိုင်း။ အခု ကျနော်တို့ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းက ချေရဲ့ "ဘိုလစ်ဗီးယားဒိုင်ယာရီ" ကို အခြေခံ ရိုက်ထားတာ။ သူတို့ ဘိုလစ်ဗီးယားနိုင်ငံထဲကို တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ၀င်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း.. ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ဘိုလစ်ဗီးယားက အာဏာရှင်အစိုးရကို တော်လှန်ဖို့ သူနဲ့ ရဲဘော်နည်းနည်း ၀င်ခဲ့ ကြတဲ့ အကြောင်းပဲ။ အခု ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တော့ အရင်က သူ့ကိုမျက်ကန်း ကြည်ညိုနေတဲ့ အမြင်ထက်စာရင် ကျနော် မေးခွန်းတွေ ခေါင်းထဲမှာစီပြီး ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်နေမိတယ်။ အရွယ်နဲ့ အတွေ့အကြုံလည်း ကျနော့်ကို ပြောင်းစေခဲ့ပြီပဲ။
ချေက ၁၉၂၈ ဇွန် ၁၄ မှာ မွေးတယ်။ ဘိုလစ်ဗီးယားမှာ သူကျသွားတော့ ၁၉၆၇ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်။ အသက် ၄၀ နီးပါးအရွယ်။ သူက ရဲဘော် ၅၀ လောက်နဲ့ ဘိုလစ်ဗီးယားကို တော်လှန်ရေး စတင်ဖို့ ၀င်သွားခဲ့ တယ်။ အဲဒီကာလမှာ သူ မျှော်မှန်းခဲ့တာက အရည်အချင်း၊ လေ့ကျင့်မှု သိပ်မပြည့်ဝသေးတဲ့ ဘိုလစ်ဗီးယား တပ်မတော်ကို အလွယ်တကူပဲ အနိုင် ယူနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်က နောက်ကွယ်က ကူညီနေတာ၊ ရိန်းဂျားတပ်ဖွဲ့တွေကို ပံ့ပိုးလေ့ကျင့် ပေးနေတာတွေ သူ သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ သူက ဒေသခံ တွေဆီက ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုရမယ် ထင်ထားပေမယ့်လည်း ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ သူကွယ်လွန်သွားတော့ နောက်ဆုံး တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒိုင်ယာရီမှာ ဘိုလစ်ဗီးယားကွန်မြူနစ်ပါတီက အားကိုး မရဘူး၊ ယုံကြည်လောက်စရာ မရှိဘူး။ မိုက်မဲတယ် လို့ ဖော်ပြထားခဲ့တယ်။ ကျူးဘားနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ရေဒီယိုတွေ ကလည်း ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဘိုလစ်ဗီးယားတောထဲမှာ စစ်သား ၁၈၀၀ ကျော် ၀ိုင်းပတ်ချေမှုန်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရေးက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၃၀ ကျော် (၁၁-လတာ) မှာတော့ ဖမ်းခံရပြီး သုတ် သင် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။
တော်လှန်ရေးကို အိပ်စ်ပို့တ် (နိုင်ငံခြားတင်ပို့လို့ ရသလား၊ တင်သွင်းလို့ရသလား) ဒီမေးခွန်းကို ကျနော်မေး မိတယ်။ နောက်ထပ် ကျနော့်အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်မေးနေမိတာက သူ.. ဘာမှားသွားသလဲ။ ဘယ်နေရာမှာ စပြီး မှားတာလဲ။ ဒီမစ်ရှင်ကိုယ်၌က အကောင်အထည် ဖော်သင့်တဲ့ မစ်ရှင်လား။ ကျူးဘားက ၀န်ကြီးအဆင့်အထိ တာဝန်ယူပြီးမှ စွန့်ပြီး ရဲခေါင်ပြောက်ကျား လာပြန်လုပ်တာဟာ ကျူးဘားနိုင်ငံရေးထဲမှာရော နောက်ကွယ်က အာဏာလုပွဲပြဿနာတွေ သူ ကြုံနေခဲ့ရပါသလား။ ဒီလို မေးခွန်းတွေဆင့်နေမိတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကမ်မီရီတောင်တန်းပေါ်က ချေတို့တပ်ဖွဲ့ကို တွေ့ရတယ်။ ချေရဲ့ မုတ်ဆိပ်ပသိုင်းတွေက ရှည်လျား လို့။ သူတို့ မျက်နှာတွေက ပင်ပန်းမှုအပြည့်နဲ့ ချောင်ကျ။ တခါတလေ ပင်ပန်းရင်၊ စိတ်လှုပ်ရှားရင် ချေရဲ့ ရင်ကျပ်ပန်းနာက တရွှီးရွှီး မြွေတကောင်အလား ပြန်ထတယ်။ ဘိုလစ်ဗီးယားရဲ့ အဲဒီဒေသရဲ့ တောက ခြောက် သွေ့တော။ သူတို့တပ်ဖွဲ့က ရွာတွေနား မကပ်နိုင်လို့ ရိက္ခာပြတ်နေကြပြီ။ ရွာသားတချို့ကို ဆက်သွယ်တော့လည်း သစ္စာဖောက်ခံရတယ်။ သူတို့ကို ထောင်ချောက် သွင်း အတိုက်ခံရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ချေရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့တွေအနား နီးလာပေါ့။ ဘိုလစ်ဗီးယားတပ်တွေရဲ့ ၀ိုင်းပတ်မှုက စိတ် လာတယ်။ သူတို့ ထင်သလို ပြည်သူ့စစ်ပွဲ မဆင်နွှဲနိုင် တော့ဘူး။ သူ့ရဲ့ "ဘိုလစ်ဗီးယားဒိုင်ယာရီ" မှာ ရေးခဲ့တယ် "လယ် သမားတွေက ကျနော် တို့ကို ဘာအကူအညီမှ မပေးကြဘူး။ သူတို့က သတင်းပေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။"
သူကယ်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် သူရဲ့ခါးသီးတဲ့ မှတ်ချက်ပါပဲ။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သူက ပြောတယ်။
Che Guevara: The peasant is likeawild flower in the forest, and the revolutionary likeabee. Neither can survive or propagate without the other.
ချေ။ လယ်သမားတွေက တောထဲပ ပန်းရိုင်းတွေနဲ့တူတယ်။ တော်လှန်ရေးသမားကတော့ ပျားနဲ့တူတယ်တဲ့။ အပြန် အလှန် မှီတည်နေကြတဲ့ပုံကို ပြောတယ်။
Ernesto Che Guevara: Lamor.
မေး။ တော်လှန်ရေးသမားတဦးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အရည်အချင်းက ဘာပါလဲ။
မေး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟုတ်လား။
ချေ။ လူသားတွေကို ချစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။တရားမျှတမှုနဲ့ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးမှုပေါ့... တကယ့် တော်လှန်ရေး သမားအစစ်အမှန်တဦးဟာ သူ့ကို အလိုရှိတဲ့နေရာကို သွားနိုင်ရမယ်.. လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ သတင်းပေးဖြစ်ကုန်ကြတဲ့ လယ်သမားတွေကို ဘယ်လို မြင်မိမယ် မသိပေဘူး။
ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ ကျနော့်မိတ်ဆွေကို ပြောဖြစ်တယ်။ ကျနော်တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ABSDF က တပ်မှူး တဦး အကြောင်းပါ။
Posted by Yaw Han Aung at 5:25 AM